Sharciga cusub ee isgaarsiinta muxuu uga dhignaan doonaa dhaqaalaha Soomaaliya? | Saxil News Network
Image captionIsgaarsiinta Soomaaliya
Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeeyey ansixiyey sharciga isgaarsiinta, kaasi oo soo jiitamayay wax ka badan 10 sanno .
Sharcigan oo uu baarlamaanka horgeeyey wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta Cabdi Canshuur ayaa waxaa u codeeyey 158 xildhibaan, hal xildhibaana waa uu diidey sida uu sheegey guddoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Mudane Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudeey.
Wasiir Cabdi Canshuur oo codka xildhibaanada kadib BBC-da la hadlay ayaa yiri “Waxaa la horgeeyey baarlamaankii 7aad, kii 8aad, kii 9aad, kii 10aad ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyey, sharcigan isgaarsiinta waa sharci dalka aad ugu baahnaa, waxaan nahay dowladda kaliya caalamka aanan lahayn sharci isgaarsiin , waa nasiib wanaag haddii aan maanta yeelanay, sharcigan waa mid u danaynaya bulshada xag amni, xag dhaqaale iyo xag bulshada”.
Hoos u dhac ku yimid ganacsiga Shiinaha
Goobaha internetka ganacsiga ah oo Hargeysa ku yaraaday
Ganacsiga xaafadda Islii oo hoos u dhac laga dareemayo
Sida ay qabaan dadka dhaqaaleyahanada ah, haddii dowladda ku guuleysato in ay canshuur ka qaado shirkadaha isgaarsiinta, waxa ugu soo xaroon kara dhaqaale badan oo ay ku maareyn karto baahiyo badan, sida mushaharaadka ciidammada.
Balse sharcigani waxa uu kaliya quseeyaa isgaarsiinta loo isticmaalayo xagga rayidka, waxaana ka baxsan isgaarsiinta laamaha amniga sida sirdoonka iyo militariga oo lagu dhaqayo sharci kale oo ah kan amniga qaranka.
Khasaare ballaaran oo ka dhashay internet la’aanta Koonfurta Soomaaliya
Adeegii internet-ka ee koonfurta Soomaaliya oo dib loo soo celiyay
Image captionQadka Internetka badda soo mara
Soomaaliya waxa ay leedahay mid ka mid ah isgaarsiinta ugu horumarsan adduunka, uguna qiimaha raqiisan sida lagu sheegey warbixino badan oo soo baxay, iyada oo isticmaalka taleefoonada gacanta ay Soomaaliya xitaa kaga sarayso dalalka dariska la ah iyo dalal badan oo Afrika ka mid ah.
Waxaa jira illaa 20 shirkadood oo bixiya adeegyo kala duwan oo taleefoonada iyo internetka ah, kuwaasi oo isugu jira kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar, waxayna taasi suurtogalisey in meelkasta kasta oo Soomaaliya ka mid ah ay taleefoonada gaaraan, qadka internet-kana yahay mid helitaankiisa uu aad u kordhey.
Wasiir Cabdi Canshuur oo arrintaasi ka hadlay ayaa sheegey in sharciga cusub uu jideynayo is shirkadaha is wacaan iyada oo la illaalinayo xuquuqda qofka muwaadhinka